के यो मायाँ हो ? – मझेरी डट कम
हिजो अबेर फर्किएकी हेमा लाई आज पनि कलेज ढिला हुन लागिसकेको थियो । हस्याङ फस्याङ गर्दे बाटो मा निस्किईन । आज माक्स वाला केटो अलि अगाडी रहेछ । ढिला हुन लागेको ले उनि लामो लामो फड्का मा हिडीन । उसलाई उछिन्नै लाग्दा ‘एक्सक्युज मी’ को आवाज ले हेमा ले उसको अनुहार तिर हेरीन ‘धन्यवाद’ भन्दै उसले हिजोको पेन रिटर्न गर्यो । उनी पेन समातेर बाटो लागीन । केटोले सोध्दैथ्यो ‘तिम्रो नाम…’ हेमा ले सुनेको नसुन्यै गर्दै मन मन मा भनिन “कति न नाम चाहिएको ..”
माघ महिनाको अन्त अन्त तिर केही दिन देखी त्यो माक्सवाला लाई उनले देखेकी थिईनन् । दैनिक जसो उनका आँखाहरु उसलाई खोज्थे । कलेज मा पनि क्लास भरि उनी एक नजर लाँउथिन । एक प्रकार को बेचैनी छाईराख्यो हेमा को मन मा । १७ दिन पछी उ सेतो पहिरन मा त्यै बाटो मा देखियो । हेमा लाई गएर अँगालो हालौँ जस्तो भएको थियो । तर उसको ड्रेसप देखेर नतमस्तक भईन । नजिकै गएर कम्पित स्वर मा सोधिन –
कुरा यत्ती नै भयो गम्भिर मुद्रा मा दुबै कलेज पुगे । दिन हरु बित्दै गए उनि हरु अलि नजिक भएर गफ गर्ने र जिस्कने गर्न थालेका थिए । कलेज मा कोही कोही साथी ले उनिहरुको कुरा काट्दा पनि हेमा लाई आनन्द आउथ्यो । बाहिर बाहीर नकारे जस्तो गर्दे भित्र भित्र रोमाञ्चीत भएर सुन्थिन उनी ।अ चेल उनी हरु छुट्टी मा सँधै जसो कफि सप जान्थे । उसको नाम सागर थियो । सागर ले एकदिन कफिसप को मधुर रोषनी मा हेमा लाई ‘आईलभ यु भन्यो’ । हेमा जुरुक्क उठेर बाहिरिईन । सरसरी कोठामा आईन । ढोका मा चुक्कुल लगाईन र बेडमा डङ्रङ्ङ ढलिन । मस्तिस्कमा ज्वारभाटा गई रहेको थियो । आखिर किन यि पुरुश हरु यस्ता हुन्छन । सागर लाइ मैले अरु भन्दा फरक सम्झेकी थिएँ । खै त पृथकता ? मलाई अरुले जे भन्थे अन्त्यमा उसले नि त्यै भन्यो । अरु भन्दा एक बुँद पनि फरक रहेनछ उ पनि । यि पुरुश हरु हामी लाइ के सँझन्छन हँ??? म भोली देखि त्यसलाई भेट्दीन । म बोल्दा पनि बोल्दीन । अचानक सागर को कल आयो उनले रिसिभ गरिनन् । ह्वाटस्एप फेसबुक सबै मा ब्लक गरिन र मोबाईल अफ गरीन । मन मा कुरा खेल्न छोडेनन् , उनले सोचीन अब उन्को सागर प्रती को सद्भाब सकियो । अब उ मेरो लागी ‘ऊ’ रहेन न म नै उसको लागी ‘म’ रहेँ । ‘ऊ’ उ नै भयो र म ‘म’ नै भएँ हामी अलग धार भयौ । न उस्ले ‘म’ भएर सोच्यो न मैले उ भएर सोच्न सक्छु । माघ को जाडो मा उनको शरीर पुरै तातेको थियो । आबेग भरिएको थियो कण कण मा । उनलाई यस्तो लाग्दैथ्यो गएर चिथोरूँ उस्लाई । आखिर किन यती सस्तो सब्द मा किन्न खोज्छन यि पुरूश हरु हामिलाई ? आधा रात भयो तर मन मा बिचलन भएपछी निद्रा लाग्ने कुरै भएन । उनी रातभर अनिदो बसिन । भोलीपल्ट कलेज गईनन् काममा पनि गईनन् । पर्सीपल्ट पुन उनी कलेज गईन । तर सागर न बाटो मा नै भेटीयो न कलेज मा नै । निपर्सि पल्ट पनि आएन फेरी अर्को दिन सनिबार । उफ्…. किन उसको अभाब खड्किरहेको छ यो मन मा । के म पनि उसलाई मायाँ गर्छु त ? नो एण्ड नेभर ! आफै प्रश्नोत्तर गर्दै सनीबार बित्यो । आईतबार बिहानै उनी सँधै भन्दा एक घण्टा पहिले बाटो मा निस्किईन र सागर को प्रतीक्षा गर्न थालीन । सबै साथी हरु कलेज गए तर उ आएन आठ बजे सम्म उनी रोड मा बसीन अँह उ आएन । फर्किएर कोठा गईन । मन मा अनौठो डर लाग्यो उनलाई । कतै उसले पनि आबेष मा आएर आत्महत्या.. । नाई यो हुन सक्दैन उनि एक्लै चिच्याईन । उसलाइ कल गर्ने हिम्मत जुटाईन र नम्बर डायल गरीन ‘ तपाईले सँपर्क गर्न खोज्नु भएको नम्बर मा अहिले सम्पर्क हुन सकेन …’ टेलिकमको रेडिमेड जबाफ । उन्लाई जमिन भासिएको आभाष भयो । KFC का स्टाफ हरु उनको मलिनता देखेर लाजबाफ बनेका थिए । एकाएक उनमा आएको परिबर्तन ले सब अवाक थिए । उनी आफै पनि छक्क थिईन के यै बेचैनी लाई भन्छन त मायाँ ?